Isiqingatha seenkampani ezivotelweyo sinephepha kuGoogle + | Martech Zone
Isiqingatha seenkampani ezivotelweyo sinePhepha kuGoogle +
NgoMgqibelo, nge-18 kaFebruwari ngo-2012 Douglas Karr
Sibaleke a I-Zoomerang poll kwibar esecaleni kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo ukufumana umfanekiso ocacileyo wokuba zingaphi iinkampani ezamkele iphepha likaGoogle +. Iziphumo zovoto zahlulahlulwe ngokugqibeleleyo… ngama-50% abafundi kuphela athe inkampani yabo inephepha kuGoogle +. Ngelixa oko kunokubonakala ngathi kuphantsi, ndicinga ukuba amanani ayinyani angaphantsi kakhulu. Ndandingenathemba lokuba abaninzi banabo.
Njengoko sijonge abo sikhuphisana nabo kubaxhasi bethu, besidla ngokungafumani kuGoogle + kwaye sesinye sezizathu zokuba sibakhuthaze ukuba babekho. Nanku umzekelo womnye wabathengi bethu, uLifeline, onayo Elona ziko likhulu ledatha kumbindi mpuma. I-VP yabo yeNtengiso ibisoloko ikhupha umxholo kwaye itsalela ukulandela okuhle.
Amava ethu asibonisile ukuba ukwamkelwa kwangethuba kukhokelele ekukhuleni okukhawulezileyo xa kuziwa kwimithombo yeendaba. Ayisiyonyani ukuba uzokuliphumelela idabi namhlanje… kodwa ukuba kwaye xa indawo yentlalo iqala, ukwamkelwa kwakho kwangoko kukwenze inkokheli apho. KuGoogle +, xa ndikhangela amaziko edatha, zimbalwa iziphumo. Eyokuqala yiLifeline, elandelayo yinkampani yokwakha idatha, kwaye eyokugqibela yinkampani yeCanada yeDatha yeZiko.
Ziindaba ezimnandi ezo kuDoug kunye neqela lakhe eLifeline. Sele kukho izigidi zabasebenzisi kuGoogle + uninzi lwabo lusakha iinethiwekhi zabo. Kuba akukho khuphiswano, uDoug unokubamba abalandeli bangaphambili ukuba ngewayengazange afike ngaphambili kwaye wayityala iflegi yakhe emhlabeni njengeengcinga eziphambili, ezinxibelelana kakuhle neZiko leDatha. Eli linyathelo eliqinisekileyo elinokuthi libeke i-Lifeline kwishishini, hayi iqhinga elinokubuyisa ngokukhawuleza kutyalo-mali.
Ngaba ulwenzile uphando kukhuphiswano lwakho kuGoogle +? Ngaba abo ukhuphisana nabo sele bebeka ivenkile kunye negunya lokwakha kule nethiwekhi yoluntu ekhula ngokuqinileyo kwaye ngamanye amaxesha inokuthi inike i-Facebook imali yayo? Kuya kufuneka ukhumbule ukuba ayisiyiyo malunga nina, imalunga nokuba baphi abaphulaphuli bakho. UDoug ufumene abanye babaphulaphuli kuGoogle +. Kuya kufuneka ucinge ngokufumana eyakho apho, nayo!
tags: Indawo kagooglegoogle kunyeiphepha elinguGoogleGoogle +